အင်္ဂလိပ် Grammar အွန်လိုင်း» Hodges တက္ကသိုလ် - ၀ င်ခွင့်
Categories: အင်္ဂလိပ် Grammar, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား, Hodges Connect ကို, အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး
Hodges Connect မှအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ Grammar သင်တန်းများဖြင့်ရှင်သန်နေထိုင်ပါ။
အခြေခံမှအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အထိအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါပုံစံများကိုနားလည်ရန်အတွက်အစီအစဉ်တကျစနစ်ဖြစ်သော Hodges တက္ကသိုလ်၏အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Self-paced အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်သည်သဒ္ဒါကိုနားလည်ရန်နှင့်အင်္ဂလိပ်စကားကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောဆိုရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်သောအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နာမ်များ၊ ကြိယာများ၊ ဝါကျများနှင့်ကြော်ငြာများတွင်သင်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုရယူပါ။ ထိုစွမ်းရည်များသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်ကိုထိရောက်စွာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုးချဲ့ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများတိုးပွားစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းသင်ကြားရန်၊ စာသင်ခန်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်၊ စာသင်ခန်းသို့မဟုတ်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်ရှက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရှက်ရွံ့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကိုပို့ဆောင်ရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားလိုသောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်း။ ယနေ့အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါသင်တန်းကိုစတင်ပါ!
ဤသည်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် non- ဒီဂရီရှာဖွေရေးသင်တန်းဖြစ်ပါတယ် Hodges Connect ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်သင်၏အလုပ်ရှင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သည့်နေရာတွင်သင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာ Grammar သင်တန်းများအားလုံးရှာဖွေပါ
Hodges Connect ပရိုဂရမ်များကိုရှာပါ
အစ၌စတင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ Grammar Online Courses 1, 2, & 3
နာမ်များ၊ နာမ်စားများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ နာမဝိသေသနများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ လက်ရှိတင်းမာနေများနှင့်ဘီ၏အတိတ်ကာလအဖြစ်အပျက်များကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နှင့်အသုံးပြုရမည်ကိုနားလည်ပါ။ နားလည်မှုနှင့်စကားပြောစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်မည်သို့အမြတ်ထုတ်ရန်၊ မေးခွန်းများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်လေ့လာပါ။
အစ: $ 299
Beginner English အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ
အလယ်အလတ်အဆင့် - အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါအွန်လိုင်းသင်တန်းများ ၄၊ ၅ နှင့် ၆ ကိုဆက်လက်လေ့လာပါ
ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ကာလများတွင်ရိုးရှင်းသောနှင့်တိုးတက်သောအချိန်ကာလများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုနားလည်ခြင်း၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများနှင့်တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်အကြံဥာဏ်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံရန်။ ဝါကျများကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်၊ စကားလုံးကြိယာများနှင့်ဆက်စပ်သောပုံစံများကိုနားလည်အောင်လေ့လာပါ၊
အလယ်အလတ်: $ 299
အဆင့်မြင့်အဆင့်: English Grammar Online Courses 7, 8, &9နှင့်ပြီးအောင်လုပ်ပါ
ရိုးရှင်းသော၊ ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်တိုးတက်သောတင်းမာမှုများ၊ နာမဝိသေသနနှင့်နာမ်ဝါကျများ၊ တက်ကြွ။ passive အသံများ၊ ဖြစ်နိုင်ချေ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ဆန္ဒများကိုတင်းမာမှုအားလုံးနှင့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်မည်သို့ဖော်ပြရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ထို့အပြင်နားလည်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စကားပြောကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်မိန့်ခွန်း၏စည်းချက်နှင့်အသံထွက်ကိုလေ့လာပါ။
အဆင့်မြင့်: $ 299
မည်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ သင်ခန်းစာ (၉) ခုလုံးကိုရယူပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းပါဝင်ပါသည် အပြန်အလှန်လေ့လာခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းများ၊ အသံထွက်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းမဟာဗျူဟာများ.
ESL ၏ဒါရိုက်တာ Dr. Leisha Cali မှ ၂၈ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးသောသင်တန်း။
အရစ်ကျ $9အတွက်အင်္ဂလိပ် 795 သဒ္ဒါအဆင့်အားလုံး သို့မဟုတ်ဝယ်ယူ တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒေါ်လာ ၂၉၉ ဖြင့်စတင်ခြင်း၊.
Dr.Lisha Cali အကြောင်း၊ ESL ဒါရိုက်တာနှင့် Hodges Online အစီအစဉ်တို့အကြောင်း
ESL ၏ဒါရိုက်တာဒေါက်တာ Leisha Cali သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ သူသည်အတွေ့အကြုံ ၂၈ နှစ်ကျော်ရှိပြီး၊ သုတေသနနှင့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများကိုပေါင်းစပ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းကျောင်းသားများကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်းမှဘာသာစကားသင်ယူမှုမဟာဗျူဟာများပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းအလုပ်။
သူသည် Online English Grammar သင်တန်းကိုလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရန်မတတ်နိုင်သူများအတွက်အထူးတီထွင်ခဲ့သည်။
self-PACE မည်သည့်မိုဘိုင်းကိရိယာကိုမဆို သုံး၍ Canvas မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်သောအခြားအစီအစဉ်များ။
Grammar သင်တန်းများကသင့်ကိုကူညီရန်ဒီဇိုင်းဆွဲသည် စကားပြောနှင့်ရေးသားထားသောစကားလုံးနောက်ကွယ်ရှိအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပါ.
သင့်ကိုကူညီသည် ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအင်္ဂလိပ်ကျော်လွန်ပြီးသင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပါ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများအပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုများသည်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးမှဖြည့်စွက်ရန်အထိဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတစ် ဦး ကြိုက်သလောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာယူနိုင်သည်။
သင်ကြား ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဝေါဟာရ ကျယ်ပြန့်သောဝေါဟာရထက်သင့်အားထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ပေးသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စည်းချက်နှင့်တေးသံများဖြင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အတူသင်၏ပိုက်ဆံအတွက်ပိုမိုရယူပါ - ရိုးရာနှင့်အွန်လိုင်းအစီအစဉ်များတွင်မကြာခဏလျစ်လျူရှုခံရသောဒေသများ။.
အတိုချုပ်အားဖြင့် Hodges တက္ကသိုလ်၏အင်္ဂလိပ်ဂရမ်မီအွန်လိုင်းပရိုဂရမ်သည်သဒ္ဒါအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်နိုင်ရန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်မည်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုသင်နားလည်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Majani Lullein၊ ဒုတိယသမ္မတ Anchorage Productions မီဒီယာ
“ ဒီအစီအစဉ်ကကျွန်တော့်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောကမ္ဘာကြီးဆီကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ကူးပြောင်းဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါမရှိရင်ငါဒီတိုင်းပြည်မှာငါ့ပညာရေးကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး”